Ilungelo Lase-US Lokwazi I-CDC Yamadokhumende Ngamayelana Nayo neCoca-Cola - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Posted on February 21, 2018 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesithathu, Februwari 21, 2018
I-US Ilungelo Lokwazi wamangalela iZikhungo Zokulawulwa Nokuvikelwa Kwezifo (CDC) namhlanje ngokwehluleka kwe-CDC ukuhambisana noMthetho Wenkululeko Yolwazi (FOIA) nokunikeza ngemibhalo ukuphendula izicelo eziyisithupha mayelana nokusebenzisana kwayo neNkampani yeCoca-Cola.
Izicelo zamarekhodi omphakathi ziyingxenye yophenyo olwenziwa yi-USRTK ngethonya likaCoca-Cola e-CDC kanye nomthelela wenkampani kumgomo womphakathi. Ubufakazi bezempilo yomphakathi busikisela ukuthi ukusetshenziswa kwama-sodas anoshukela kuyabandakanyeka kubhubhane lokukhuluphala, futhi kungaba nesibopho amashumi ezinkulungwane zokufa ngonyaka. Yize kunjalo, ubufakazi obuhlanganisiwe kuze kube manje bukhombisa ukuthi abasebenzi beCDC unikeze ukuholwa kwezepolitiki ku-Coca-Cola, kuvunyelwe uCoca-Cola kuya ukunxenxa iCDC, futhi yemukela iminikelo evela kwaCoca-Cola nge-CDC Foundation, eveze leyo minikelo kamuva nje ngonyaka odlule.
"Simangalela iCDC ukuthola ubukhulu nobunjani bobudlelwano beCDC neCoca-Cola," kusho uGary Ruskin, ongumqondisi obambisene ne-US Right to Know, iqembu lababheki nezempilo yomphakathi. "Njengoba nje kungalungile ukuthi iCDC isize izinkampani zikagwayi, kubuye kungalungile ukuthi iCDC isize izinkampani ezinamehlo afana neCoca-Cola."
Kusukela ngo-2016, i-USRTK ifake izicelo eziyi-19 ze-FOIA ne-CDC. Ngemibhalo esiyitholile nge-FOIA evela ku-CDC nakweminye imithombo, sisize ukudalula ubudlelwano bokusebenzisana kukaMqondisi we-CDC noBrenda Fitzgerald noCoca-Cola kanye nowayengumphathi wale nkampani no-Chief Science and Health Officer uRhona Applebaum New York Times futhi I-Intercept.
Siphinde saveza ukuthi uBarbara Bowman, owayengumphathi ngaleso sikhathi weCDC's Division for Heart Disease and Stroke Prevention, wayeluleke lowo owayeyisekela likamongameli omkhulu weCoca-Cola mayelana nokuthi ungamisa kanjani i-World Health Organisation ekuqedeni ushukela owengeziwe. UBowman uyeke iCDC ngemuva kwezinsuku ezimbili kudalulwe izeluleko zakhe kowayengumphathi weCoca-Cola.
Siphinde sasiza ekutholeni ukukhathazeka kwabasebenzi be-CDC ukuthi iCDC “Umsebenzi ubunjwe amaqembu angaphandle kanye nezintshisekelo ezinamandla”Nokubiza kwabo ku“hlanza lendlu. "
Okunye okutholakele ekuphenyweni kwethu kwethonya likaCoca-Cola e-CDC kuyatholakala ku: usrtk.org/our-investigations/#coca-cola.
NgoDisemba 15, 2017, i-USRTK yafaka izicelo eziyisithupha ze-FOIA kwi-CDC maqondana nobudlelwano bayo neCoca-Cola. I-CDC ivumile ukuthi izitholile lezi zicelo ze-FOIA ngemuva kwezinsuku ezine, kepha ayikaze inikeze enye impendulo. Umthetho we-FOIA uthi izinhlangano zikahulumeni kudingeka ziphendule zingakapheli izinsuku ezingama-20 zebhizinisi.
Ngokusho the Coca-Cola obala database, AbakwaCoca-Cola banikele ngamaRandi ayizigidi eziyi-1.1 ku-CDC Foundation phakathi kuka-2010-12. Kodwa iCoca-Cola ayizange iveze iminikelo kwiCDC Foundation ngemuva konyaka wezi-2012. ICDC Foundation idalula leyo minikelo, kepha hhayi leyo mali, eminyakeni 2017, 2016, Futhi 2015 - akukho okukodwa okudalulwe yiCoca-Cola.
Kokubili iCDC neCoca-Cola kusekelwe e-Atlanta.
I-CDC isikhucululwe emahlazweni amabili akamuva. NgoJanuwari 31, uMqondisi we-CDC uBrenda Fitzgerald washiya isikhundla sakhe, kulandela i- Isihloko sePolitico ephakamisa imibuzo ngokutshala kwakhe imali kugwayi nakwezinye izinkampani. NgoDisemba 15, i- Kubikwa iWashington Post ukuthi i-CDC ivimbele uhlu lwamagama noma imishwana eyisikhombisa - njengokuthi "okusekelwe ebufakazini" kanye "nokususelwe kwisayensi" - kusuka kumadokhumenti wesabelomali.
Icala le-USRTK FOIA lifakwe eNkantolo Yesifunda sase-US esifundeni saseColumbia. Isikhalazo se-USRTK siyatholakala ku: https://usrtk.org/wp-content/uploads/2016/09/USRTK-v-HHS-complaint.pdf. Igama laleli cala yi-US Right to Know v. Department of Health and Human Services. I-USRTK imelwe kulolu daba yihhovisi lezomthetho likaMark S. Zaid.
Imininingwane engaphezulu mayelana namacala we-USRTK obala uku: usrtk.org/our-litigation.
Ukukhishwa Kwezindaba, Uphenyo lwethu, Amacala ethu, Abathandekayo